ဒေသတွင်း လူငယ်များ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန? - Yangon Media Group
သထုံ၊ စက်တင်ဘာ ၂၆
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ လူငယ်များ၏ ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ သထုံမြို့ ကျုံး ကြီးလမ်းရှိ ကရင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သထုံမြို့နယ် ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောစံတင်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး Green Day Youth Network ဥက္ကဋ္ဌကိုနေထက်မိုးက တွေ့ဆုံဆွေး နွေးပွဲ ကျင်းပခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြကာ မိမိတို့ရပ်ရွာ ဒေသတွင် လူငယ်များ လတ်တလော ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို အစုအဖွဲ့ အလိုက်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ သထုံမြို့နယ်ထဲက လူငယ်တွေ ရဲ့ ဘဝတွေ တိုးတက်မြင့်မားလာဖို့ အတွက် အလေးထား ဆွေးနွေးခဲ့ ကြတယ်။ ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ရပ်ကွက်နဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု တော်တော်များများက လူငယ်တွေ တက်ရောက် ပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့အတွက် ဆွေးနွေး ပွဲက အထိုက်အလျောက် အောင် မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်”ဟု အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို ဦးဆောင် စီစဉ်သူ သထုံမြို့နယ် အခြေစိုက် Green Day Youth Network ဥက္ကဋ္ဌ ကိုနေထက်မိုးက ပြောသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် လူငယ်ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို တက်ရောက်လာကြသူများ က ဖြေဆိုခဲ့ကြပြီး လူငယ်ဘဝဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သည်များကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအကြံ ပြုခဲ့ကြသည်။
Green Day Youth Network အနေဖြင့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း Information and Youth Deve- lopment Center တစ်ခုကို သထုံမြို့၌ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သွားရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါစင်တာ ဖွင့်လှစ်ပြီးပါက ဒေသခံလူငယ်များအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း၊ အွန်လိုင်း ရုပ်သံမီဒီယာမှ လူငယ်များအတွက် သိသင့်သိထိုက်သော သတင်းအချက် အလက်များမျှဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိ ရသည်။
ရေနံ လုပ်ကွက်တွင် သံဂဟေဆက်ရာမှ မီးပွားလွင့်စဉ်၍ ရေနံလက်ယက်တွင်းကို မီးစွဲလောင်၊ လူလေးဦး ??